June 24, 2019 June 24, 2019 by साहारा संदेश
पछिल्लो समय चर्चित गित गल्बन्धिले खुबै चर्चा कमाएको छ। यसै गितको बिवादले पनि यश गितलाई थप उचाईमा पुर्याएको छ। तर शम्भु राईको गित संग लय मिल्न गएको भनिएको गित अहिले यो बिवाद चरम उत्कर्शमा रहेको छ । सामाजिक सन्जालमा एक अर्काको बिरोधी र समर्थन गर्नेको जुहारी नै चलेको छ। यो घटनाले यहाँ संगीतको भन्दा पनि शम्भु राई र प्रकाश सपूत को लडाई जस्तो बनेको छ माहोल।
सामाजिक सन्जालमा यसै बिशय लाई लिएर जात जाती संग पनि जोड्न भ्याएका छन मान्छेहरुले। यसै बिच एक जनाले प्रकाश सपुतले अग्रजको सम्मान नगरेको र उसमा दलिद मानसिकता रहेको बताए पछि चर्चित गाएक शिभ परियारले आफ्नो फेसबुक पेजमा लामो स्टाटस लेखेका छन।
1)पहिला बल लगाएर तल झार्न खोज्छ बलमा पनि सक्दैन !
2)बुद्दी लगाएर तल झार्न खोज्छ त्यसमा त झन् सक्दैन !
3)अनि सम्बन्धित विधामा अज्ञानी छ कमजोर छ भनि दुस्प्रचार गरेर झार्न खोज्छ त्यसमा त झन् फेल नै खान्छ सक्दैन !
4)त्यसपछि चरित्र हजार मान्छे संग जोडेर चरित्र हत्या गरेर जात देखायो भनेर तल झार्न खोज्छ सत्य कुरा पो सत्य हुन्छ झुट कहिल्यै सत्य हुँदैन यो त झन् सक्दै सक्दैन
5)अन्तिममा तल झार्ने सबै बाहना सकिएपछि सके सम्म यस्तै गरि अथवा पछाडी आफ्ना दुई चार आसेपासे संग दमाई ,कामि ,हैसियत भनि हाहाहाह गरेर हाँसेर खिल्ली उडाएर कुरा काटेर तल झार्ने प्रयास गर्छ ! हो म बाँचेको समाज यस्तै छ ! यस्ताहरुबाट के आशा गर्ने ? यस्तो तत्वहरुको बिरुद्दमा अब चुप लागेर बस्ने अवस्था रहेन ! मलाई मेरो जात प्रति सधैं गर्व छ !
Prevयी ७ गुण हुने पुरूषप्रति आकर्षित हुन्छन् केटीहरू
Next‘गलबन्दी’ विवादको संसदमा चर्चा : जातीय कुरा उठाउनेलाई कारबाहीको माग